Su’aalo & jawaabo ka dhashay sida ay musharraxnimada Khayrre uga fal-celiyeen qaar ka mid ah mucaaradku | Hadalsame Media
DEG DEG: DF Somalia oo war rasmi ah kasoo saartay xadgudubka…
TOOS u daawo: Juventus vs Barcelona, Man United vs RB Leipzig,…
DHEGEYSO: Xisbiyada Sweden oo inta badan soo jeediyey in la kordhiyo…
”Waa wax iskuma falayaal anshax daran!” – Erdogan oo ka hadlay…
XOG: Wasiirkii Amniga oo diidey inuu RW Xigeenku kasoo muuqdo munaasabad…
Wargayskii horay u daabacay kartuunkii lagu xumaynayey Nabiga (NNKH) oo maanta…
Khilaafka biyo-xireenka iyo Trump: Sida uu MW Trump “u khiyaamay” Itoobiya!
Khabib oo lacagtii abid ugu badnayd ka helay feerkii ugu dambeeyey…
Muxuu Bogba ka yiri warka sheegaya inuu ka fariisanayo ciyaaraha Xulka…
FIFA oo qaab dhega hadal ah dhambaal hambalyo ah ugu soo…
DAAWO: “Waalidkaa ogoow!” – Khabiib oo ciyaaraha ka fariistay lana dardaarmay…
”Sug aan soo eegee!” – Garsoore VAR ka ishaaray horyaal aan…
Rwanda oo keentay qorshe loo bogay oo lagu baaro cudurka Covid-19…
Home Maqaallada Su’aalo & jawaabo ka dhashay sida ay musharraxnimada Khayrre uga fal-celiyeen qaar...
Su’aalo & jawaabo ka dhashay sida ay musharraxnimada Khayrre uga fal-celiyeen qaar ka mid ah mucaaradku
(Hadalsame) 19 Sebt 2020 – Ra’iisul wasaarihii hore ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maalintii Sabtiga September 12, 2020 ku shaaciyay bartiisa Twitterka in uu doorashada soo socoto musharrax u yahay madaxtooyada Soomaaliya. Golaha Shacabka ayaa July 25, 2020 kala noqday kalsoonidii xukuumaddiisii xilli dalku u baahan yahay xasillooni siyaasadeed.
Ku dhawaaqidda musharraxnimada Khayre waxay dhalisay su’aallo ka badan jawaabaha la bixin karo. Wax yar ka hor inta aan Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Mudane Xasan Cali Khayre ku kala weecan masiirka siyaasadda, “Nabad iyo Nolol” waxay u muuqatay mid aan lagu loodi karin masraxa siyaasadda Soomaaliya.
Sida soo baxday muddo kaddib, khilaafka Farmaajo iyo Khayre wuxuu salka ku hayay: b) Muddo kororsiga xukuumaddooda; t) Iskahorimaadka doorasho Qof iyo Cod iyo waqtiga u dhiman xukuumaddooda; iyo j) Laga maarmaannimada shirka wadatashiga Dowladda Federaalka iyo Maamul goboleedyada.
Waxaa soo dhaweyey Khayre dad u arkayay inuu yahay shaqsi aan muran ka taagneyn tartanka doorashada sanadka dambe. Balse taasi ma dhaboobin, kaddib markii siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu dareensaday musharraxnimada Khayre ugana falceliyay si aan caadi ahayn, iyadoo lala yaabban yahay mabda’a uu u taagan yahay.
Warar laysla dhaxmarayay baraha bulshada ayaa sheegay in Mudane Khayre uu ka cudur daartay inuu ka hormuuqdo xafladdii Hotel Doorbin, hase yeeshee, xeeldheerayaasha arrimaha Soomaaliya ayaa sheegaya in xafladu ay ahayd mid loo qabanqaabiyay hab qabiil, taas oo khilaafsan mabaad’ida siyaasadda ee uu Khayre damacsan yahay inuu ku tartamo.
Dad badan ayaa isweydiinaya maxaa Khayre deddejiyay iyadoo weli la sugayo hannaanka doorasho ee uu dalka qaadan doono. Ilaa hadda Madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul-goboleedyada si daacad ah iskuma afgaran qaabka loo dhigayo doorashada iyo waqtiga la qaban doono. Inta yar ee ay gaareenna waxay ku timid isku jiidjiidka beesha caalamka.
Malaha Mudane Khayre wuxuu saadaaliyay in shirka wadatashiga uu ku dhammaanayo sida ay rabaan maamul goboleedyada, sida ku cad warmurtiyeedkii soo baxay September 17, 2020.
Dhinaca kale, weerarka Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxuu si tooxan uga turjumayaa in Khayre uusan ku biirin ilaa hadda xerta Abu Dhabi. Balse siyaasiyiin in mudda ah ku maqnaa degaankaas (Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan) ayaa dib ugu soo laabtay saaxadda siyaasadda culaysna saaraya dowladda.
Waxaa muuqata in la guda galay ololihii doorashooyinka madaxweynaha iyo golayaasha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya (BFS), iyadoo aysan muuqan mucaarad waddani ah oo isku duuban una barbardhigi kara Madaxweyne Farmaajo. Balse, haddii Farmaajo uu ku sii wada siyaasiyiinta ka soo horjeeda riixitaanka, waxaa laga yaabaa inuu ugu dambeynta ku soo dhaweeyn doono Villa Somalia.
Si kasta ha noqotee, booqashadii lama filaanka ahayd ee guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Xildhibaan Maxamed Sheikh Cusman Jawaari uu ku tegay guriga Ra’iisul wasaarihii hore Mudane Xasan Cali Khayre ayaa u muuqato mid kordhin doonta su’aalaha siyaasadeed ee aan la ogeyn waxa xigi doona.
Xaqiiq waxaa ah wada jirka siyaasiyiinta ku bahoobay “Madasha Xisbiyada” inaysan kalsooni fiican u dhaxeyn. Taas waxaa u daliil ah in ilaa maanta ay la soo bixi la’yihiin hoggaamiye mideeya.
Guud ahaan, maqnaasha hoggaamiye mucaaradka kala duwan ku daba safan yihiin waxay ka dhigan tahay in doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee soo socoto siyaasiyiinta ashaamudka ah (kala duwan) ay ku midoobi doonaa keliya dhaqankoodii ahaa “Lugta ha lagu dhego ninka Villada fadhiya.”
Waxaa Diyaariyey: Burhaan H Rooble & Cabdulqaadir Cariif Qaasim
FG: Qoraal kasta wuxuu ka tarjumayaa aragtida qoraha ku saxiixan
Previous article“Halla garab istaago!” – Khayrre oo soo dhoweeyey RW bedeley
Next articleSi hadda kaddib looga fursado jahawareer siyaasadeed waa in laba middood la yeelaa (Laba hindise)
DEG DEG: DF Somalia oo war rasmi ah kasoo saartay xadgudubka Faransiiska
TOOS u daawo: Juventus vs Barcelona, Man United vs RB Leipzig, Club Brugge vs SS Lazio
DHEGEYSO: Xisbiyada Sweden oo inta badan soo jeediyey in la kordhiyo mudada ay soconayso lacag loo qoray dadka u nugul Covid-19
hadalsame - October 28, 2020
(Muqdisho) 29 Oktoobar 2020 - DF Somalia ayaa ka mid noqotay dalalkii ugu dambeeyey ee Muslim ah oo war kasoo saara xadgudubka loo gaystey...
”Waa wax iskuma falayaal anshax daran!” – Erdogan oo ka hadlay kartuunkii laga sameeyey
XOG: Wasiirkii Amniga oo diidey inuu RW Xigeenku kasoo muuqdo munaasabad uu xilka ku wareejinayey
Wargayskii horay u daabacay kartuunkii lagu xumaynayey Nabiga (NNKH) oo maanta sameeyey mid kale oo lagu caayayo Erdogan & haweenka Muslimka ah
Juventus: Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata Kaydka Juventus: Pinsoglio, Buffon, Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, De Winter, Frabotta, Portanova, Riccio Barcelona:...
TOOS u daawo: FC Krasnodar vs Chelsea, Basaksehir vs PSG – LIVE (Shaxda Sugan)
TOOS u daawo: Liverpool vs FC Midtjylland, Atalanta vs Ajax – LIVE (Shaxda Sugan)
TOOS u daawo: B. Moenchengladbach vs Real Madrid, Marseille vs Manchester City – LIVE (Shaxda Sugan)
TOOS u daawo: Lokomotiv Moscow vs Bayern Munich, Shakhtar Donetsk vs Inter Milan – LIVE (Shaxda Sugan)